कहिलेसम्म डरैडरको कैद हुने हो, यो जिन्दगी ? अन्तअन्त लकडाउन गर्दा सरकार धेरथोर दयालु देखिएका छन् । बुटिटाट जनलाई तिनले थोरैतिनो चारोको चाँजो मिलाएका छन् । नेपालमा तातोभुत्लो केही छैन । दूर दरबारबासी सरकार ठान्दो हो, 'मेरो पेट दुनियाँको पेट हो । मैले टन्न खानु दुनियाँले टन्न खानु हो । बस्, म खुब खान्छु, टन्टै खलास !' २४ मंसिर, २०७७6min read Share